Homepage - Hoygamaansada
Abwaan da’a yar iyo riyadiisii magaalada
Maansada Soomaalida iyo waqtiga casriga
Hal luuqad & Adduun wada Gabay ah
"Xamar bilan" Waxaa qoray Ayaanle Abdirahman Qoyste
Sii wad aqriska
Cabdirizak Bashir Axmed oo ku magac dheer “Hogol Caafi” waxuu bilaabay inuu gabyo asagoo jiro 7 sano kaliya. Curintiisii ugu horeysay waxay ku bilaabatay maalin uu waalidkiis kula dooday inuu aado magaalada Hargeysa. “Familkeena waxuu daganaa tuulo yar oo u dhow Ceerigaabo, gobolka sanaag. Aniga waxaan rabay inaan Hargeysa u wareego” ayuu yiri kol dhow
“Mar walba oo aan murano ardayda iskuulka ama aan kaftanno, ma aysan waayi jirin fursad ay Soomaaliya wax qaldan uga sheegaan,” ayey tiri Gabyaa Zahra Cabdihagi iyadoo ka waramaysa xaaladahii xumaa ee yaraanteedii kula soo kulantay dallka Canada. “Mar walba waxay Soomaaliya ku sheegi jireen burcad-badeed iyo faqri, ceeb ayaana dareemi jiray. Markaas ayaan billaabay
Qurbajoogta Soomaalida waxay dhaqankooda ku nooleeyeen Gabayga, kaasoo ay adeegsadaan meel waba ay joogaan. Iyadoo ay wado doonista lahaanshaha iyo inay dib ugu xirmaan asalkooda ayaa waxaa soo kacay Abwaanno da’a yar oo qurbajoog ah, kuwaasoo gacanta ku haya suugaanta ay faraca u leeyhiin. Maansayahnnadaan da’da yar waxay badanaa Maansadooda ku qoraan luuqada Ingiriiska iyo
Fadumo Yusuf oo loo yaqaanno naaneysta “Derbi”, waxay ku dhalatay Bariga Afrika. Iyadoo da’a yar ayey waalidkeeda usoo guuureen dalka mareykanka. Fadumo waxay qortay Buug ciwaankiisu yahay, Ayan, of the Lucky”. Shahaadadeeda koowaad “Bachelor of Science in Mechanical Engineering” waxay ka qaadatay Jaamacadda St Thomas. Shahaadadeeda labaad “Master of Science in Mechanical Engineering” waxay ka qaadatay Jaamacadda Minnesota.
Keydka Maansada Soomaalida
Aqriso gabayada Soomalida, kuwii hore iyo kuwa casriga
La kulan Abwaanada
Xulka ugu wanaagsan gabayga Soomaalida. Wax ka baro abwaanada saameynta kuleh bulshada Soomaalida.
Qeybaha Maansada Soomaalida Casharka Koowaad: Gabayga
Waxaa qoray Abwaan Axmed Farah Idaajaa
Wareysi Abwaan Guure: Muhiimada ay Maansada u leedahay bulshada Soomaalida
Naciima Abwaan Qorane oo Gabay ka tirisay halista uu leeyahay cudurka Corona
Qeybaha Maansada Soomaalida Casharka Labaad: Geeraarka
Qeybaha Maansada Soomaalida Casharka Sadaxaad: Jiiftada
Qeybaha Maansada Soomaalida Casharka Afaraad: Heesaha Dhaqanka
Qeybaha Maansada Soomaalida Casharka Shanaad: Heesaha Casriga
Arag kuwa kale
Rukumo maanta (ku xirnow)
Tweets by Hoygamaansada